“Haddii uu noqdo Arsene Wenger macalinka xiga ee Man United, dib dambe uma taageeri doono” – Gool FM
(Manchester) 26 Sebt 2019. Arsene Wenger ayaa wareysi uu dhawaan ku bixiyay shabakada beIN SPORTS wuxuu ku sheegay in leylinta Manchester United ay noqon laheyd riyo.
Haddaba qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha kooxda Manchester United ayaa ka jawaab celiyay hadaladii ka soo yeeray macalinkii hore Arsenal ee Arsene Wenger saacadihii ugu dambeeyay, ee ku saabsanaa suurtogalnimada uu ku qaban karo shaqada tababarka ee Red Devils.
Jamaahiirta Manchester United ayaa waxay sheegeen inaysan ku qanacsaneyn in Arsene Wenger uu yahay shaqsiga saxda ah ee ku haboon inuu wax ka badalo xaalada ay haatan ku jirto kooxda ku ciyaarta garoonka Old Trafford.
Dhinaca kale Arsene Wenger ayaa soo jeedayay qaabka ugu dhow ee looga saari karo kooxda Man United xaalada ay haatan ku sugan tahay, wuxuuna tilmaamay in 4 ciyaaryahan oo kaliya ay Isbadal ku sameyn karaan, kaddib natiijooyinkii niyadjabka ahaa ay ku soo dhax jirtay sanadihii lasoo dhaafay.
Haddaba mid ka mid ah taageerayaasha kooxda Man United oo ka jawaabayay hadaladii uu ka dhawaajiyay Arsene Wenger ayaa wuxuu yiri:
“Haddii uu noqdo Arsene Wenger macalinka soo aadan ee kooxda Manchester United, dib dambe uma taageeri doono”.